Barcelona Oo Hoggaaminaysa Tartanka Loogu Jiro Mucjisada Brazil Ee Endrick - GOOL24.NET
Barcelona Oo Hoggaaminaysa Tartanka Loogu Jiro Mucjisada Brazil Ee Endrick
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay tartanka loogu jiro mucjisada da’da yar ee reer Brazil ee Erdrick oo lagu tilmaamo 15ka loogu doonista badan yahay, uguna qiimaha badan da’diisa.
Endrick oo kasoo baxay kulliyadda da’yarta kooxda Palmeiras ayaan wali hal kulanna u safanin kooxda koowaad, hase yeeshee waxa uu haddana kasbaday in kooxaha waaweyn ee Yurub ay indhaha la raacaan oo ay saxeexiisa ku dagaallamaan kaddib markii ay daawadeen bandhigga uu ka sameeyo kooxda da’yarta ee Palmeiras.
Laacibkan ayaa la sheegay inuu saxeexi doono heshiis cusub xagaagan marka ay da’diisu noqoto 16 jir, kaas oo lagu darayo qodob dhigaya in qandaraaskiisa lagu burburin karayo 60 milyan oo Euro.
Barcelona oo urursatay koox da’yar u badan oo mustaqbalka loo carbinayo kaddib markii ay fasaxday ciyaartoydii waaweynaa sida Lionel Messi, Luis Suarez iyo Antoine Griezmann ayaa waxay dedaal badan gelinaysaa sidii ay safkeeda ugu soo dari lahayd Endrick.
Kooxda kale ee reer Spain ee Real Madrid ayaa la rumysan yahay in ay iyaduna doonayso Endrick, iyada oo adeegsanaysa xeeladdii ay sannado ka hor kusoo xero-gelisay Rodrygo Goes iyo Vinicius Junior oo iyaga oo da’doodu aad u yar tahay ay iibsadeen kaddibna kooxahooda u daayeen si ay ugu gaadhaan da’da 18 jirka ee loo ogol yahay in ay qaaradda Yurub usoo safraan.
Maadaama sharciga FIFA uu u damaanad-qaadayo in laacibkani aanu ka tegi karin Brazil illaa inta ay da’diisu noqonayso 18 jir sannadka 2024, Palmeiras ayaa qalinka ku duugaya heshiis soconaya illaa sannadka 2024 ama 2025, waqtigaas kaddib oo ay qorshaynayso inay iibiso.